आयोजकले चुम्यो उपाधि : RajdhaniDaily.com -
Home खेल आयोजकले चुम्यो उपाधि
लमजुङ । मस्र्याङदी गाउँपालिका–३ ढगैं गाउँमा सञ्चालन गरिएको २०औं सुकमान स्मृति फुटबल गोल्ड कप उपाधि आयोजक मनास्लु युवा क्लब ढगैंले जितेको छ । आयोजक मनास्लु युवा क्लब ढगैं र कन्याज्योति युवा क्लब घलेगाउँलाई हराउँदै उपाधि जितेको हो ।
फाइनल खेल प्रतियोगितामा शून्यविरुद्ध १ गोल गरी आयोजक मनास्लु युवा क्लब ढगैंले कन्याज्योति युवा क्लब घलेगाउँलाई हराउँदै उपाधि जितेको छ ।
उपाधिसगै उसले ७० हजार रुपैयाँ, सुकमान स्मृति गोल्ड कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । उपविजेतामा चित्त बुझाएको कन्याज्योति युवा क्लब घलेगाउँले दोस्रो भएस“गै ४० हजार रुपैयाँ, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको आयोजक मनास्लु युवा क्लब ढगैंका सचिव पूर्ण गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार महिलातर्फ भएको फाइनल खेल शान्तिदीप युवा क्लब दिङदिङ र कुमारी फुटसलबीच भएको थियो । तर, निर्धारित समय अवधिमा कुनै पक्षबाट पनि गोल हुन नसकेपछि ट्राइबेकरमा ५ विरुद्ध ६ गोल गरी शान्तिदीप युवा क्लब दिङदिङले उपाधि हासिल ग-यो ।
सो क्लबले उपाधिस“गै १५ हजार रुपैयाँ, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगितामा उपविजेतामा चित्त बुझाउन बाध्य कुमारी फुटसल टिमले ८ हजार रुपैयाँ, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । आयोजकका अनुसार पुुरुषतर्फ सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी कज्याज्योति युवा क्लब घलेगाउँका विनोद आले मगर र महिलातर्फ कन्यादेवी युवा क्लव मिप्राका सिर्जना गुरुङ घोषित भएका छन् ।
त्यस्तै, सर्वाधिक गोलकर्तामा आयोजक मनास्लु युवा क्लब ढगैंका आयुष गुरुङ घोषित भए । उनले खेल अवधिभर १० गोल गरेका थिए । त्यस्तै, महिलातर्फ शान्तिदीपका सितल आयर सर्वाधिक गोलकर्ता घोषित भइन् । उनले खेलअवधिमा ६ गोल गरेकी छन् । दुवै थरीलाई ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रतियोगितामा मालिङ युवा क्लब मालिङ अनुशासन टिम छनोट भएको छ । सो टिमलाई एक भलिबल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोजक क्लब सचिव पूर्ण गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतियोेगितामा विजयीलाई मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेत तथा आयोजक क्लब अध्यक्ष योजबहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरेका हुन् ।
प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ४३ टिम र महिलातर्फ १० टिमले भाग लिएको आयोजक क्लब सचिव गुरुङले जानकारी दिए ।
सुकमान गुरुङ तत्कालीन खुदी गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष थिए । २०५८ सालमा तत्कालीन एमालेले सञ्चालन गरेको महँगी र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको सदरमुकाम बेंसीसहरमा निकालेको जुलुसमा भाग लिइरहेको बेला प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनको निधन भएको थियो ।
बिचार राजधानी संवाददाता - June 20, 2020 0
अर्थ राजधानी संवाददाता - August 25, 2020 0
कोरोना अपडेटः युरोपमा मात्र १ लाख बढीको मृत्यु
विदेश राजधानी संवाददाता - April 21, 2020 0
जेनेभा । कोरोनाभाइरस महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहे पनि यसबाट सबैभन्दा बढी असर युरोपेली मुलुकहरुमा देखिएको छ । युरोपेली मुलुकहरुमा मात्र एक लाख...
Breaking News राजधानी संवाददाता - August 14, 2020 0
प्रमुख राजधानी संवाददाता - September 3, 2020 0
प्रदेश २ राजधानी संवाददाता - August 3, 2020 0
Breaking News राजधानी संवाददाता - August 27, 2020 0
शहीद दिवसमा उपेक्षित शहीदहरू !
बिचार राजधानी संवाददाता - February 1, 2021 0
हरेक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म शहीदलाई सम्झने चलनलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिँदै अघिल्लो साता हामीले शहीद सप्ताह मनायौं । कवि भूपी शेरचन...
ब्लग राजधानी संवाददाता - December 18, 2019 0